musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Rajasthan Anoita Maitiro Akashata neVashanyi Mhosva
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Rajasthan uye mhosva yevashanyi
Yatove nyika yakapfuma nevashanyi, Rajasthan muIndia yatora nhanho inobata vimbiso yakawanda yekuvandudza nekusimudzira ruzivo rwevashanyi, kune vese vekumba nekune dzimwe nyika mufambi.
Mitemo mitsva inogona kufamba nzira yakareba mukudzivirira vashanyi kubva mukushungurudzwa uye zvakashata zviitiko pazororo muRajasthan.
Kusazvibata kune vashanyi ikozvino kuchazoonekwa semhosva inozivikanwa, mhosva.
Kana munhu akadzokorora hunhu hwakadai, mutadzi anozochengetwa pasina mukana wekubvisiswa mari yechibatiso.
Nyika yekuchamhembe, iyo inowana vashanyi kubva mukati menyika pamwe nekune dzimwe nyika, yauya nemutemo unogona kubatsira nenzira yakareba mukudzivirira vashanyi kubva mukushungurudzwa uye zviitiko zvakashata pavanenge vari pazororo.
Chero hunhu husina kunaka kuvashanyi hwaizoonekwa semhosva inozivikanwa, uye kana hunhu uhwu hukadzokororwa, mutadzi anozochengetwa pasina mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Kuti uwane izvi, shanduko yakaitwa uye chikamu 27A chakaunzwa mu Rajasthan Tourism Kutengesa, Inotungamira uye Mutemo Mutemo 2010. Izvi zvakapasiswa nevhoti yezwi muParamende yenyika. Vatungamiriri vemaindasitiri vanoti ivo vachatarisa nekufarira kuti danho iri rinoitwa sei pasi.
Chikamu chegumi nematanhatu cheMutemo Mutemo 13 Mutemo unotaura nezve "kurambidza zvimwe zviitiko nezviitiko munzvimbo dzevashanyi," uye izvo zvinorambidza kupopota, kukumbira uye kutengesa zvinyorwa zvinotengeswa mukati kana munzvimbo dzakapoterera nzvimbo.
Nepo nyika ichiwana vashanyi vazhinji vanobva kure nepedyo kuti vaone zvinokwezva zvakasikwa nezvivakwa, kazhinji kune zvichemo zvekuti vabati nevatengesi vanovabiridzira, zvichisiya kusagadzikana uye ruzivo. Kunyanya, kwakave kwakawedzera zviitiko zvekupara kwemadzimai zvichikonzera vashanyi vekunze kutora zororo kumwe kunhu.
Rajasthan anga ari piyona mukushanya aine hupfumi hwetsika uye zvakasikwa pamwe nekuita hunyanzvi uye hunyanzvi. Mumakore achangopfuura, zvakadaro, vanoti saMadhya Pradesh, Kerala, uye Goa vauya nemamwe mazano ekuvandudza uye zvirongwa zvekukwezva vashanyi.
Nhare nedzimba dzehumambo dzenyika yechangamire iyo ine midziyo yenhaka futi, haina yakaenzana, asi izvo hazvina basa kana nyika yawana zita rakaipa nekuti mamwe makwai matema ari kusvibisa chimiro chehurumende.
Ndeipi nhanho nyowani inoenda kudzora zvisirizvo ichiri kuzoonekwa.